Iindaba zesiXhosa, 26 eyeNkwindla 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 26 eyeNkwindla 2019
Written by Ashia Nkontsa on 26/03/2019
Kubonakala ukuba luzosokolisa ulonyulo lwevoti yalonyaka
Kanye nje kwisithuba seeveki ezingeninzi kuyaphi phambi kolonyulo jikelele lwalo nyaka iqela elilawulayo kweli phondo i-DA ivumile ukuba lunzima ugqatso lokuphumelela eli phondo. I-DA inoloyiko lokufumana iivoti ezingaphantsi kweepesenti ezingamashumi amahlanu nto leyo ingavumela amaqela aphikisayo i-ANC neEFF ukuba zenze urhulumente wobambiswano ozakuguzula lona elulawulweni. Uphando lubonisa ukuba inkxaso yeDA ikumashumi amahlanu eepesenti lo gama i-ANC imi kumashumi amathathu anesithathu eepesenti. Umgqatswa kwisikhundla sobunkulumbuso kweli phondo ophuma kwi-DA umnumzana Alan Winde uthi bayaluva uxinezelelo nanjengoko ikokokuqala kwilixa leminyaka elishumi i-ANC ivuma ukuba yenze iimpazamo kwaye izimisele ukuzilungisa. Ukanti, i-DA isasaza imiyalezo elumkisa abavoti ukuba bangavoteli amaqela amancinane nanjengoko oku kuzakunika i-ANC amandla okulawula ngobambiswano nala maqela. Inkokheli yegqugula leANC kwisixeko seKapa umnumzana Xolani Sotashe uthi ayibothusi nakancinane le ndlela yeDA yokukhankasa kwaye beyi-ANC bangenela ukuliphumelela ulonyulo.
I-NUMSA Ilwelwa abasebenzi base BMW
Imanyano yabasebenzi i-Numsa ithi izakuqhubeka nokulwela amalungelo okuqhankqalazo amalungu ayo asebenza kwaBMW kwilizwe loMzantsi Afrika. Le nkampani yezithuthi ifumene isithintelo senkundla sokuthibaza abasebenzi abaphantsi kwale manyano ukuba bangene kuqhankqalazo. Izolo abasebenzi babeke phantsi izixhobo begqushalazela ukuguquka kwemigomo yeemeko zabo zokuphangela nalapho le nkampani iceba iinguqu ezizakuba nechaphaza kwimivuzo yabo. iNumsa ithi le nkampani ityeshela isivumelwano sayo sangaphambili sendlela yokusebenza kwanokuhlawulwa kwabasebenzi.
Avukile amatyala kaDuduzane Zuma
Kulindeleke ukuba lithabathise kwakho ityala elijinga phezu kwentloko kanyana walowo wayefudula engumongameli weli lizwe umnumzana Jacob Zuma, uDuduzane Zuma. Le nqeberthu ijamelene namatyala amabini okubulala ngengozi kulandela ungquzulwano lwesithuthi sakhe neso sasikhwele amaxhoba uPhumzile Dube kwakunye noNanki Mashaba ngomnyaka ka2016. Ugqibele ukuvela enkundleni ngenyanga yoMqungu kwaye kulindeleke ukuba uvavanyo lwetyala luqhube iitsuku ezine. Umnumzana Jacob Zuma angaya enkundleni nanjengoko ebesoloko emnika inkxaso unyana wakhe.
Uvumile uMfundisi ngokubulala owayencuma naye
Owayesakuba ngumfundisi waseMitchell’s Plain uvumile ukuba wabulala owasetyhini ancuma naye ngokumxangxatha ngelitye entloko ephinda-phinda. UKeith Bird ugwetywe iminyaka engamashumi amahlanu engaphaya kwezitshixo kwinkundla ephakamileyo yaseKapa. Oku kuza emva kokuba engene kwisivumelwano necandelo lotshutshiso evuma amatyala amabini okubulala kwakunye nasixhenxe okudlwengula. Ezi zehlo zenzeke phakathi komnyaka ka2013 no2016 nalapho uninzi lwazo azenze eMitchell’s Plain kwaye kule minyaka yakhe mithathu yolwaphulo-mthetho uBird ugwinte inenekazi awayezakutshata nalo u-Anniesa Bardien kwakunye noSharvonne Koense owayeneminyaka engamashumi amabini ubudala. Umzimba kaBardien ufunyenwe emva kweentsuku ezilishumi edizwe njengodukileyo lo gama uKoense wadlwengulwa waza wabulawa kwisithuba seeveki ezimbini phambi kosuku lwakhe lokuzalwa. UBird uthi wadibana neli nenekazi kwisiyunguma ngenyanga kaCanzibe ngo2013 waza walibongoza limpheleke nalapho alifake kwindawo enamatyholo apho alidlwengule khona waza walikrwitsha labhubha.
Kujongwe ukhuseleko kwinkomfa yabafundi
Umphathiswa wezempilo kwiphondo leNtshona Koloni unkosikazi Debbie Schafer uthi ukhuseleko ezikolweni ngomnye wemiba ophambili kwinkomfa yezemfundo ebanjelwe eKapa. Le nkomfa intsuku-mbini iqale izolo kwiziko leendibano laseKapa kwaye isingathwe lisebe lezemfundo lephondo. uSchafer uthi injongo yale nkomfa kukudibanisa abathabathi nxaxheba abohlukeneyo khon’ukuze bashukuxe imiba echaphazela ezemfundo. Malunga neeveki ezimbini ezidlulileyo kuhlatywe kwabhubha umfundi wesikolo samabanga aphakamileyo i-Rusthof ngomnye umfundi kumasango esikolo ngethuba bedlala umngcakazo. Ukanti kwisithuba senyanga kuhlatywe abafundi abathathu emva kwengxabano kwisikolo saseCeres.